औंला’बाट थाहा हुन्छ युवती’का प्रेमी कति वटा ? « गोर्खाली खबर डटकम
औंला’बाट थाहा हुन्छ युवती’का प्रेमी कति वटा ?
शास्त्र अनुसार जुन युवतीका हात तथा खुट्टाको औंला लामा– लामा हुन्छन् त्यस्ता युवतीहरु धोकेबाज हुन्छन्
कुन युवतीले कति प्रेमी बनाउँछन् त्यो उनिहरुको स्वभावमा भर पर्ने कुरा हो । शारीरिक बनावट र देखावटी रुपले होइन ।तर, समुन्दशास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार युवतीको शरीरका अंग अनुसार पनि उनीहरुको प्रेमीको अवस्था थाहा हुन्छ ।
हामीले समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएका स्त्रीका केही विशेषताहरु उल्लेख गरका छौं । शास्त्र अनुसार जुन युवतीका हात तथा खुट्टाको औंला लामा– लामा हुन्छन् त्यस्ता युवतीहरु धोकेबाज हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रेमीलाई जुनसुकै बेला धोका दिन सक्छन् ।
जुन स्त्रीका खुट्टामा औंला लामा र गोला हुन्छन् उनीहरु भाग्यमानी हुन्छन् । तर छोटा र टेडामेडा परेका औंलाहुनेहरु भने त्यति भाग्यमानी नहुने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख
औंला लामा हुनु स्त्रीहरुका लागि राम्रो भएपनि पुरुषहरुका लागि भने त्यस्ता युवतीको भर पर्दा धोका हुन सक्छ । त्यस्ता स्त्री निक्कै चतुर हुने र धेरै पुरुषसँग एकैपटक सम्बन्ध राख्ने समुन्द्रशास्त्रमा उल्लेख छ ।
शास्त्रका अनुसार जुन स्त्रीका खुट्टामा औंला लामा र गोला हुन्छन् उनीहरु भाग्यमानी हुन्छन् । तर छोटा र टेडामेडा परेका औंलाहुनेहरु भने त्यति भाग्यमानी नहुने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
लकडाउनमा निकै नै बोल्ड अवतारमा देखिएकि सुष्मा कार्कीको बिन्दास मुड (फोटो फिचर सहित)